septembre 2018 - Page 85 sur 85 -
Fanadinana BEPC : Ny mpiadina sisa andrasana
Hanomboka amin’ny alatsinainy 03 septambra manerana ny Nosy ny fanadinam-panjakana BEPC amin’ity taona ity, ary tsy hifarana raha tsy amin’ny 6 septambra, izany hoe haharitra efatra andro. Efa vonona avokoa ny pitsopitson’ny rehetra momba ity …Tohiny
Tokony ahitana taratra ny fiainan’ny olona na fiarahamonina, amin’ny lafiny rehetra ny horontsarimihetsika (films). Milaza miara-mahita anefa isika fa mbola lavitra ny dian’ireo mpamokatra horonantsarimihetsika eto amintsika noho ny antony maro ka ny voalohany amin’izany …Tohiny
Festival 321 : Haneho soradihy 30 mahery
Miditra amin’ny andiany faha-3. Soradihy maherin’ny 30 no haseho mandritra ny hetsika iraisam-pirenena ho an’ny soradihy « Festival 321 », izay hotanterahina eto Antananarivo ny 3 ka hatramin’ny 8 septambra. Niainga avy amin’ny tetikasan’ireo tarika samihafa ary …Tohiny
« Indray andro hono » : Seho atolotr’i Momotabande
Seho ho an’ny ankizy, nefa hanasana ihany koa ireo olon-dehibe. « Indray andro hono » no seho atolotr’i Momota sy ny ekipany, na ny momotabande etsy Antsahamanitra rahampitso tolakandro izao ao anatin’ny fotoam-pialan-tsasatra. « Natao ho an’ireo ankizy …Tohiny
Hikarakara fifidianana tafiditra ao anatin’izany ny fanadiovana ny lisi-pifidianana no andraikitra nankinina tamin’izao governemanta Ntsay Christian izao fa tsy hanadio fako eny Ankorondrano. Tomponandraikitra feno amin’ny fizotry ny fifidianana ireo andrim-panjakana efatra dia ny CENI, ...Tohiny